“मानो रोपेर मुरी” फलाउने महिनाको रुपमा लिइन्छ असार महिनालाई । र यहि महिनामा हरेक वर्षको १५ गतेको दिनमा रोपाई पर्व मनाउने गरिन्छ । अचेल यो दिनलाई रोपाईँ दिवस नै भन्न थालिएको छ । अझ नेपालले २०६२ सालदेखि त असार १५ लाई “राष्ट्रिय धान दिवस”कै रुपमा मनाउन...
दुई दिन विदाः कति उत्पादक वा कत्तिको औचित्यहीन
अहिले नेपाल सरकारले जेठ १ गतेदेखि शनिबार र आतइतबार दुई दिन सार्वजनिक विदा दिन थालेको छ । सरकारको यो निर्णय कति सान्दर्भिक र कति व्यववहारिक छ त ? यो प्रश्नले विशेष गरेर शिक्षा क्षेत्रमा सार्वजनिक बहस नै थालेको छ । सरकारी खर्चमा मितव्ययिता ल्याउने...
महिला दिवस र नारी अधिकार
आज मार्च ८ अर्थात अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस । विश्वभर विभिन्न कार्यक्रम गरी ११२ औं अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाईंदैछ । नेपालमा पनि महिला अधिकार क्षेत्रमा कार्यरत संघ संगठनहरुले विभिन्न कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाइरहेको छ । महिला जागरण र महिला हक...
२०७८ फाल्गुण १५, आइतबार
नेपाली अभिनेता पल शाहमाथि ‘नाबालिग’माथि जबर्जस्ती करणी गरेको आरोपसहित गएको बुधबार प्रहरी कार्यालय तनहुँमा जाहेरी दर्ता भएको छ । यससँगै आमसञ्चार माध्यम र अझ सामाजिक सञ्जालमा यस घटनाबारे विभिन्न टीका–टिप्पणी आउँदै गरेका छन् । विशेषतः पल शाहलाई ‘फसाउन...
राज्यको दृष्टिमा मातृभाषा र नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवसको औचित्य
धेरैले बिर्सिसके होला — ६९ वर्ष भयो, ढाकामा केही युवाहरुले आफ्नो मातृभाषाको सम्मान बिधान सभाबाट लिन खोजेको । अठार वर्ष भयो, हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवस मनाउन सिकेको, मनाइरहेको पनि । यो त्यही दिन थियो जुन दिन आफ्नो मातृभाषालाई राज्यमा...
विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत चाँगुनारायण वैष्णव सम्प्रदायको महत्त्वपूर्ण तीर्थ (धाम) हो । यहाँको हनुमान मूर्तिको फेदमा उत्कीर्ण अभिलेखअनुसार यस हनुमान र काठमाडौँको हनुमानढोकाको दूरी करिब ३३ कोष (झण्डै १७ किलोमिटर) रहेको छ । भक्तपुरबाट चाँगु करिब ६...
प्रा.डा. एच.जी.बेहर (जर्मनी) द्वारा लिखित पुस्तकबाट साभार गरिएको विचारोत्तेजक सन्दर्भहरु हरेक नेवारले पढ्नै पर्छ,। कृपया एक पल्ट पढ्नुहोला । राजा महेन्द्रले उनको पुर्खाको गुणगान गरि लेख्न लगाइएको इतिहास हाम्राे पाठ्यक्रममा छ, तर वास्तविक इतिहास...
म काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १३ मा बस्छु । शुक्रबार काम विशेषले वडा कार्यालय पुगेको थिएँ । अहिले महामारीको अवस्थामा अत्यावश्यक सेवा मात्र दिइरहेको वडा कार्यालयमा भीड त खासै थिएन । तर एक एक गर्दै सेवा लिन आउने सेवाग्राही खाली पनि थिएन । त्यहाँ...
मध्यावधि चुनाब कहिले ? – मसिर मा, स्थानीय चुनाब कहिले ? – चैत्र मा, कोरोना नियन्त्रण कहिले ? – त्यो पर्दैन, हि हि––––– हिहिहि गर्ने बाहेक के छ उपाय अब ? यत्ति हुँदा पनि चेतेन नेपाली, खुबै दीपावली गरेर संविधानको स्वागत गरेको थियो नि !! स्वाद पाइयो...
यो लेख मैले तयार गर्न खोजेको अहिले होइन, धेरै समय भइसक्यो तर, समयले साथ नदिएर थाँति परिरहेको थियो । आज अनायासै यो कोरोनाको दोश्रो लहरले नेपाललाई आक्रान्त पारेको समयमा मानसपटलमा घुमिरहेका शब्दहरुलाई कापिमा उतारीहाल्न मन भयो । अहिलेको समय भनेको नेपाली...
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केहीअघि प्रेस संगठन नेपाल भेलालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा पत्रकारलाई आफ्नो पक्षमा उभिन पाठ पढाए । “पत्रकार हुँ भन्नेबित्तिकै फलानो पार्टीको हो भनेर चिनोस्”, “नर्कमा जाने”जस्ता अभिव्यक्ति दिएर आफ्ना पार्टीनिकट...
टोखा, राजधानीभित्रै परेको एउटा प्राचीन वस्ती । टोखाको मौलिक नाम तुख्यः हो । तु अर्थात उखु, ख्यः भन्नाले चौर अथवा भनौं बारी । विगतमा यहाँका खेतहरु, चौरहरु सबै उखुले भरिएको हुन्थ्यो रे । ‘तु’ को ‘ख्यः’ अर्थात उखुको चौर । तुख्यः नै अपभ्रम्स भई तोखा...
दुई तिहाईको बलियो सरकार । हुन त वर्तमान सरकारसँग केही समय अगाडीबाटै दुई तिहाई नरहीसक्यो । समाजवादी पार्टीले समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि दुई तिहारको नजिकको सरकार बनिसकेको थियो । अहिले आएर त आफ्नै दलभित्रको समर्थन समेत नरहेको अवस्था छ । तर पनि ओली...
२०७७ मङ्सिर १३, शनिबार
एक नर्सको कोरोना संक्रमण अवधिको डायरी
२०७७–०७–०३सोचे जस्तो हुन्न जीवन, साँच्चिकै हुन्न रहेछ । त्यो कालो दिन, जुन दिन मेरो जीवनमा आउला भनेर मैले कहिले कल्पनासम्म गरेकी थिइन । सुरक्षाका त्यत्रो उपाय अपनाउँदा पनि मलाई कसरी कसरी कोरोना भाईरसले आक्रमण गर्यो, मलाई थाहै भएन । अकल्पनीय क्षण...
२०७७ मङ्सिर ११, बिहिबार
प्रसङ्ग, विषयवस्तु केही दिन अघिको हो । कोरोना महामारीका बीच नेपालीहरु आफ्नो दोश्रो महान चाड तिहारको तयारीमा थिए । म भने लेख्नको लागि कुनै नौलो विषयवस्तुको खोजीमा थिएँ । कुन विषयमा कलम चआऔं सोच्दै थिएँ, खोज्दै थिएँ । मलमासको कारण एक महिना पछि सरेको...
सापारुमा गाईको जात्रा हुने होइन
आज भाद्र कृष्ण प्रतिपदा अर्थात गाईजात्रा । गाईजात्रा ? नेवाः समुदायले यो पर्वलाई सायाः अथवा सापारु भन्ने गर्छन् । यसलाई गाईजात्रा भनिनु नहुने र सापारु अथवा सायाः नै भन्नुपर्ने अभियन्ता र भाषाविद्हरु समेतको भनाई रहेको छ । धेरैको भनाई अनुसार कुनै पनि...